Soo Saaraha Ugu Wanaagsan Shank Iyo Warshad | Gimarpol
Adapters Shank waa inay ku habboon yihiin dhammaan noocyada Mashiinnada Qodista, Pneumatic iyo Hydraulic labadaba. Hawsha adabtarada shanka ahi waa inay u gudbiso xawliga wareegga, quudinta quudinta, tamarta saamaynta iyo dhexdhexaadka ku shubista xarigga daloolinta.
Waa maxay qaboojiyaha shank?
Shank bar, garaacista garabka, adabbaraha shank
Naqshadeynta cadayga cilmiyaysan iyo heerka caadiga ah waa aasaaska aaladaha layliga, isku xirka dunta oo tayo sare leh, si adag u xakamaynta habka saxda saxda ah waa habka kaliya ee lagu damaanad qaadi karo waxqabadka wanaagsan ee isku xirka dunta Isku xirnaanta dunta oo khaldan oo leh farqi weyn ama yar ayaa u horseedaya gariir badan iyo ruxrux inta lagu guda jiro qodista, sababa dunta heerkulka sare iyo jabay.
Codsiga OEM waa la heli karaa.
1. Dooro qolka leylinta ku habboon ama waxoogaa ah sida ku cad maaddada la qodayo.
2. Ku hagaaji xawaaraha wareega ee ku habboon alaabada la qodayo. Haddii xawaaraha wareega uu aad u dhakhso badan yahay, barta barta dhalaalka kulul ee kululaan ayaa jilicsan doonta, qalabka jilicsan ee xawaaraha wareegga gaabiskuna ku dheggan yahay.
3. Go'aami tirada quudinta ee mashiinka qodista iyadoo loo eegayo qoto dheerida iyo dhexroorka godka la qoday.
4. Mashiinka qodista waa quwad xawaare sarre leh oo rooti leh, waxaana loo baahan yahay in la ilaaliyo badbaadada badbaadada.
5. Fiiro gaar ah u yeelo hubinta adkaanta casharka layliga. Waxaa lagama maarmaan ah in la carfiyo ama la beddelo qolka leylinta si joogto ah.
6. Si joogto ah saliidayn usheeda dhexe layliga.
(1) Qalabaynta qodista saamaynta: siligga silsiladda qodista saamaynta siligga, mashiinnada qodista saamaynta dhuumaha.
(2) Qalab qodista Rotary: nooca feed usheeda dhexe taagan - gacanta feed nooca, muunad nooc feed kala duwan, Hayda qodista feed Haydarooliga; nooca ujawaab – xarig bir ah oo lagu daray nooca kala-goynta, silsilad haleysan oo lagu daray nooca kala-goynta qashin qodista; Nooca madaxa madaxa ee Haydarooliga wareega ee wareega, nooca mashiinka qodista madaxa awooda mashiinka.
(3) Qalab qodista gariirka.
(4) Qalab qodista xarunta: Riig qodida oo leh shaqooyin sida gariirka, saameynta, wareegga, cadaadiska ma guurtada ah iyo wixii la mid ah ee iskudhafka kala duwan.
Hore: Ulaha taabashada